Afindra amin'ny milina kafe
Ny filtriam-piasa dia tena ilaina indrindra mba hisotroana mpanamboatra kafe. Ny hatsaran'izy ireo dia miankina amin'ny tsirony sy ny fofon'ny zava-pisotro. Ary amin'ity lahatsoratra ity, dia hijery fotodrafitrasa marobe vitsivitsy ho an'ny mpamokatra kafe isika .
Kitapo taratasy ho an'ny mpanao kafe
Ny tena mahazatra dia ity karazana sivana ity, izay noforonina vehivavy tokan-tena. Nampiasa ordinatera tsotra izy hanivanana ny kafe. Tatỳ aoriana, namorona ny orinasany ny vehivavy mba hamokarana solosaina kafe. Ary androany io orinasa io dia manana toerana ambony amin'ny famokarana ity karazana vokatra ity.
Ny sivana fonosana dia azo ampiasaina, tahaka ny kônina na harona izy ireo. Noho ny endriny boribory dia mitahiry ny tsiron-tsakafo sy ny kafe rehetra izy ireny. Ary noho ny natiorany iray monja, dia tsy mahazo fofona sy fofona hafahafa ny mpaka sary. Tsotra fotsiny izy ireo miasa, tsy manam-petra amin'ny fiainana andavanandro, dia simba haingana sy azo antoka ho an'ny tontolo iainana.
Filalaovana azo ampiasaina amin'ny milina kafe
Ho an'ny filalaon-kevitra azo ampiasaina dia misy ny volamena, volamena, lamba. Ny filtron Nylon dia mila atao tsy tapaka ary arakaraka ny fikarakarana azy, satria vetivety dia miseho ao anatin'izany ny fofona. Aorian'ny 60 ampiasaina, ny sivana dia asaina miova.
Ny toetra mampiavaka ny filoloha kafe amin'ny niloloha dia ny tombom-barony ara-toekarena sy ny fiainana an-davan'andro (eo ambany fikarakarana sahaza).
Raha ny sivana volamena , dia tena tsara kokoa ny siramamy nilao, ny tandrony izay dia entina amin'ny nitrite ny titan. Ity fampitahana fanampiny ity dia mampitombo ny fiainan'ny sivana ary manatsara ny toetrany.
Ny tsy dia mahazatra loatra dia ny filalaovana lamba ho an'ny mpamokatra kafe. Izy ireo dia vita amin'ny kodiarana, kofehy rongony na cannabis. Noho ny haben'ny porofo lehibe, dia betsaka kokoa ny sedimenta amin'ny fisotroana.
Ny tontolon'ny lamba dia ahazoana loko volomparasy noho ny fifandraisana amin'ny kafe. Azonao ampiasaina toy izany mandritra ny enim-bolana.
LED strip - ahoana no safidy?
Fanadiovana vaksiny ho an'ny trano
Kitapo mofomamy mendri-piderana
Nofonaina tao anaty lafaoro
Voankazo ho an'ny voankazo
Solar collector ho an'ny dobo filomanosana
Ahoana ny fisafidianana toera-pidiovana?
Doorphone lock - fifandraisana
Kitapo elektrika ho an'ny varavarankely
Ny halalin'ny vava
Akanjo ho an'ny dihy hip-hop
Manao ahoana ny fomba hanamboarana rindrina misy sary?
Voatolokolo sira miaraka amin'ny aloman-kavoana
Hevitra ho an'ny fotoam-pivarotana sary
Sakafo kisoa - sakafo
Ny mahasoa ny tandroka
Fihetseham-po amin'ny foetus
Mastic ho an'ny tany
Ny akanjon'ny vehivavy - Herintaona 2016
Manampy fianakaviana tanora
Printsy Albert II, Princess Charlene sy ekipa nirotsaka an-tsehatra nitsidika ny Formula 1 tany Monaco
NLP - fomba fiasan'ny olombelona